စတိုင်နံပါတ်: B300168 အရောင်: ရေတပ်အရွယ်အစား: SML-XL အထည်: ၄၀ 95 မှ ၉၅% ဝါဂွမ်း ၅% elastane တစ်ခုတည်းဂျာစီ၊ ၁၅၅ ဂံအသွင်အပြင်လက္ခဏာ: တံဆိပ်ခတ်မှတ်ချက်များ: တံဆိပ်ခေါင်း + နေရာချထားပုံနှိပ်ခြင်း
စတိုင်နံပါတ် .: B300166 အရောင်: အနက်ရောင်အရွယ်အစား: SML-XL အထည်: ၄၀ 95 မှ ၉၅% ဝါဂွမ်း ၅% elastane တစ်ခုတည်းဂျာစီ၊ ၁၅၅ ဂဂမှတ်ချက်များ: ပန်းထိုးချခြင်း၊
စတိုင်နံပါတ် .: B300163 အသွင်အပြင်လက္ခဏာ: တံဆိပ်ခတ်မှတ်ချက်များ: Emboss + နေရာချထားမှုပုံနှိပ်ခြင်းဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုတည်းရှိသောတီရှပ်သည်လက်ရှိစျေးကွက်၏လိုအပ်ချက်နှင့်မကိုက်ညီပါ။ silhouette ၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြန်လည်ပုံသွင်းရန်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးဒီဇိုင်း၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများသည်ရာသီသစ်တွင်တီရှပ်ဒီဇိုင်းလမ်းကြောင်းအသစ်ကို ဦး ဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။ အမျိုးမျိုးသောပုံနှိပ်ခြင်းနည်းပညာတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်အရည်အသွေးမြင့်ဓာတ်ပုံပုံနှိပ်ခြင်းသည်တီရှပ်ပုံစံများတွင်မြင့်မားသောအနေအထားတွင်ရှိသည်။ စာပုံနှိပ်ခြင်း (t) သည်ဘုံပုံစံဒီဇိုင်းပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။
စတိုင်နံပါတ် .: B300165 အရောင်: ရေတပ်အရွယ်အစား: SML-XL အထည်: ၄၀ 95 မှ ၉၅% ဝါဂွမ်း ၅% elastane single jersey, 155g အသွင်အပြင်: တံဆိပ်ခတ်မှတ်ချက်များ: တံဆိပ်ခတ် + နေရာချထားမှုပုံနှိပ်
အမျိုးသားများအတွက် Hoddies SH-967
စတိုင်နံပါတ် .: SH-967 အရောင်: အနက်ရောင်အရွယ်အစား: SML-XL-XXL အထည်: ပိုလာသိုးမွေးဖြင့်ကပ်ထားသည့် 100% polyester ချည်ထည်, 290gsm + Poly pique, 340gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း: ရေစိုခံနိုင်လွန်ကြိုး၊ Herringbone တိပ်၊ Elastic ကြိုး၊ ပလတ်စတစ်အဆို့တာအသွင်အပြင်။ ရှေ့အိတ်ကပ်တွင်ချိတ်ပိတ်ထားသည့်ဇစ်၊ ရှေ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိပြားများကိုခေါက်။ ချုပ်ထားသည့်မှတ်ချက်များမှတ်ချက်။ ။ ပခုံးပေါ်ရှိငွေရောင်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုဖြင့်ပုံသဏ္Cutာန်ဖြင့်ဖြတ်ထုတ်။ ချုပ်ထားသည်၊ ကျောနှင့်ကိုယ်ထည်အပေါ်ဆန့်ကျင်ဘက်အရောင်ဖြတ်ခြင်း။
အမျိုးသားများအတွက် Hoddies SH-964
စတိုင်နံပါတ်: SH-964 အရောင်: အနက်ရောင်အရွယ်အစား: SML-XL-XXL အထည်: ပိုလာအမွေးပါသော 100% polyester ဂျာкарထိုးထည်, 280gsm + Poly pique, 340gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း: Nylon zipper, Herringbone tape, hood drawcord မှတ်ချက် - ငွေရောင် လက်ဝဲဘက်ရင်ဘတ်ပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်မှုန့်အိတ်ကပ်၊ အင်္ကျီလက်ပေါ်တွင်ငွေရောင်ပြန်ဟပ်စတစ်စောင်
အမျိုးသားများအတွက် Hoddies SH-963
Style No .: SH-963 အရောင်: မီးခိုးရောင်အရွယ်အစား: SML-XL-XXL အထည်: ပိုလီယွန်းသိုးဖြင့်ကပ်ထားသည့် 100% polyester ထိုးထည်, 285gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း: ရေစိုခံနိုင်လွန်ကြိုး၊ Herringbone တိပ်၊ elastic ကြိုး၊ မျက်ခုံး၊ ပလပ်စတစ်အဆို့ အသွင်အပြင်: ရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင်ခြားနားသောအရောင်များကိုဖြတ်ထုတ်။ ချုပ်ထားသည်မှတ်ချက်များမှတ်ချက် - ဘယ်ဘက်ရင်ဘတ်တွင်ဆီလီကွန်တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၊ ငွေရောင်ပြန်ဟပ်မှုနှင့်အတူရှေ့အိတ်ကပ်
အမျိုးသားများအတွက် Hoddies SH-961
Style No .: SH-961 အရောင်: အနက် / မီးခိုးရောင်မီးရောင်အရွယ်အစား: SML-XL-XXL အထည်: ပိုလာသိုးမွေးဖြင့်ကပ်ထားသည့် ၁၀၀% poliester jacquard၊ ၃၅၀ gsm + Poly pique, 340gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း: Nylon zipper၊ Herringbone တိပ်၊ Elastic ကြိုး၊ Eyelet , ပလပ်စတစ်အဆို့မှတ်ချက်။ ။ ဘယ်ဘက်အရှေ့ဘက်ရှိရောင်ပြန်ဟပ်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ငွေရောင်ပြန်ဟပ်ထည်ပါ ၀ င်သည့်ပြားပြားများ၊ သားပိုက်ကောင်အိတ်ဆောင်
အမျိုးသားအားကစား Hoddies XD-086
စတိုင်နံပါတ် .: XD-086 အရောင်: ရေတပ်၊ အနီရောင်၊ အဖြူရောင်အရွယ်အစား: SML-XL-XXL အထည်: ၇၀% ချည် ၂၅% polyester 5% spandex သိုး, 260g အသုံးအဆောင်: ပလတ်စတစ်ဇစ်၊ Herringbone တိပ်ခွေ၊ ရှေ့ပိုင်းဖြတ်နှင့်ချုပ်ထားသောမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိဆန့်ကျင်ဘက်အရောင်များမှတ်သားခြင်းမှတ်ချက် - ရှေ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်ရော်ဘာပုံနှိပ်ခြင်း၊ မျက်လုံးကြီး + ပါးပျဉ်းအဖွင့်အပိတ်တွင်ကျယ်ကျယ်သောဆွဲကပ်ထားခြင်း၊ သားပိုက်ကောင်အိတ်ဆောင်
အမျိုးသားအားကစား Hoddies XD-085
စတိုင်နံပါတ်: XD-085 အရောင်: အနက်ရောင် / အဖြူ / မီးခိုးရောင်မဲလန်းဂါအရွယ်အစားအရွယ်အစား - SML-XL-XXL အထည်: ၇၀% ဝါဂွမ်း ၂၅% polyester 5% spandex သိုး၊ 260g ဆက်စပ်ပစ္စည်း: ပလတ်စတစ်ဇစ်၊ Herringbone တိပ်ခွေ၊ ပါးပျဉ်း drawcord မှတ်ချက်။ ရှေ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိရော်ဘာပုံနှိပ်ခြင်း၊ ကြိုးဖြင့်ကြိုးဖြင့်ချိတ်ထားခြင်း၊ ကြီးမားသောမျက်လုံးကြီး + ပါးပျဉ်းအဖွင့်အပိတ်တွင်ကျယ်သောဆွဲပြား၊ သားပိုက်ကောင်အိတ်ဆောင်
အမျိုးသားစီး Sweatshirts SH-310
စတိုင်နံပါတ်: SH-310 အရောင်: အပြာရောင်အရွယ်အစား: SML-XL-XXL အထည်: ၇၀% ဝါဂွမ်း ၂၅% polyester 5% spandex သိုးမွေး၊ ၂၆၀ ဂဂဆက်စပ်ပစ္စည်း: ပလတ်စတစ်ဇစ်၊ Herringbone တိပ်၊ Silcon labe အသွင်အပြင် - ဖြတ်နှင့်ငွေပြားနှင့်ပြားချပ်ပြားများ ရှေ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်လက်ပေါ်ရှိရောင်ပြန်ထည်မှတ်ချက်မှတ်ချက်များ - ဘယ်ဘက်ရင်ဘတ်ပေါ်ရှိရာဘာပုံနှိပ်ခြင်း၊ ဆီလီကွန်ရှေ့ညာဘက်အောက်ခြေ
အမျိုးသားစီး Sweatshirts SH-309
စတိုင်နံပါတ် .: SH-309 အရောင်: အနီရောင် / အနက် / အဖြူရောင်အရွယ်အစား: SML-XL-XXL အထည်: အထည်: ၇၀% ဝါဂွမ်း ၂၅% polyester 5% spandex သိုး၊ 260g ဆက်စပ်ပစ္စည်း: ပလတ်စတစ်ဇစ်၊ Herringbone တိပ်၊ သားရေတံဆိပ်အသွင်အပြင်: ဖြတ် & ဖြတ် ရှေ့ခန္ဓာကိုယ်နှင့်လက်တွင်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်များတပ်ထားသည့်မှတ်စုများ - ညာဘက်လက်ပေါ်တွင်ရာဘာပုံနှိပ်ခြင်း၊ ဘယ်ဘက်ရင်ဘတ်တွင်သားရေတံဆိပ်ကပ်ခြင်း
<< <နောက်သို့ 123 နောက်> >> စာမျက်နှာ ၂/၃